Ụbọchị Chocolate Ụwa
Echiche nke usọrọ Day chocolate bụ nke ndị France, bụ ndị na-esite na 1995 hazie ememme nnukwu mbido iji sọpụrụ ndị mmadụ niile. Ma ọ bụrụ na mbụ ememme ahụ bụ mba, mgbe ahụ ka ndị agbata obi nke France nakweere ọdịnala ahụ, ọ gbasaa gburugburu ụwa, na-eme ka ihe omume dị ebube.
Kedu ụbọchị a na-eme ememme Chocolate Day?
Nye ndi nile choro isonye na ndi mmadu ndi na-eto nri a, mmadu aghagh ighota ubochi World Chocolate Day n'ime uwa. Ya mere, ụbọchị a dara na July 11. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-eme ememe ahụ na September 4, ha agaghị enwe ike afọ ojuju nanị otu ụbọchị n'afọ.
Ụbọchị nke Day Chocolate World na-eme ka ndị niile gbakwunyere na ọṅụ nke ụtọ nha. Ndị isi ọmụmụ kachasị mma, ntanetụ nke chocolate desserts, ihe ngosi nke akwụkwọ akụkọ, ihe oriri, ememme, asọmpi, nkà ihe ụtọ na-eme n'ụwa nile taa. Ma ọ bụrụ na ị nọdụ na nri na-egbochi onwe gị na-atọ ụtọ, n'ụbọchị a, ị ga-echezọ ihe niile a machibidoro ma banye n'ime ụwa ụtọ nke ụtọ delichaa chocolate.
Site n'akụkọ ihe mere eme nke chocolate
Mgbe Christopher Columbus hụrụ Amerịka na mberede, ya, n'etiti ihe ndị ọzọ, wetara nke a na mba ndị ọzọ mkpụrụ osisi dị ịtụnanya nke osisi koko. Mgbe ọtụtụ ndị gbalịsiri imeziwanye ihe nchịkọta ha, ndị Spaniards chetara na ị gbakwunye ihe dị ilu na-atọ ụtọ shuga. Nri eji eme ihe dika ihe ndi eze di uto, n'oge na-adighi anya, chocolate ghuru "nri nke chi nile" maka ndi ozo nke ndi obodo Europe.
Naanị oge, mgbe a na-emepụta nnukwu chocolate na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nri a dị mma maka ndị ọzọ niile nọ na ya.
A chọtara sistem chocolate na narị afọ nke 19, mgbe ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ na-emepụta ihe dị iche iche mepụtara otu ụlọ ọrụ hydraulic maka ịme bọta butter, wee mụta ịmepụta akwakọta koko ntụ ntụ, bọta butter na shuga. Obere oge, e tinyere mmiri ara ehi iji melite àgwà chocolate.
Chocolate abanyewo na otutu ndi mmadu. Taa, na-eje ije na nnukwu ụlọ ahịa ahụ, anyị na-ahụ nnukwu chocolate dị iche iche na ihe oriri - na mịrị, mkpụrụ, yogọt, osikapa airy, wdg.
Tụkwasị na nke a, ndị na-emepụta oge a amụtala ịmịpụta, na mgbakwunye na ilu na mmiri ara ehi, chocolate, nke nwere enweghị ntụ ntụ. Kama nke ahụ, ọ gụnyere vanilla na mmiri ara ehi mmiri ara ehi.
Kedu otu esi eme ememe Day Chocolate Ụwa?
N'ịchọrọ ịbanye n'òtù niile nke chocolate-worship, ọ ga-ekwe omume ịhazi oriri na Day Chocolate Day, na-akpọ ndị enyi na ndị ikwu gị niile. Na ihe niile a na-echetara ụbọchị a banyere isiokwu ezumike, na-ekwurịta tupu oge mgbede - uwe na ngwa na ụda nke na-acha oji na mmiri ara ehi chocolate na àgwà dị iche iche nke ụtọ a.
Mee ka ụlọ ahụ mara mma maka ezumike, gbasie ike: kpochapụ ihe ndị na-acha chaa chaa, mepụta nnukwu akwụkwọ nri nke chocolate, ebe a na ebe ahụ, tinye vases na chocolate. Dịka egwu, họrọ abụ ndị kpọrọ okwu chocolate.
N'ezie, n'oge ememme Chocolate Day, menu kwesịrị ịnwe oke sweets na òkè ya - ice cream na glaze, chocolate cocktails , mkpụrụ osisi na chocolate ibe, achịcha chocolate, wdg.
N'elu nke ahụ, lelee fim ahụ dum "Charlie na Ụlọ ọrụ Chocolate". A gaghị achọta ihe nkiri dị mma maka ụbọchị dị otú ahụ.
Anyị ji n'aka na ụbọchị a ga-echetara gị na ndị enyi gị ogologo oge, ma eleghị anya ọbụna bụrụ ọdịnala. Ma, a ghaghị ikwu ya, ọ bụ ọdịnala ndị a na-eme ka ndụ anyị bụrụ obere ụtọ na ihe na-atọ ụtọ karị.
Ụbọchị Ụbọchị ọmụmụ nke ụbọchị ọmụmụ
Ememme na March
Onyinye nke Afọ Ọhụrụ
Onyinye mbụ maka February 14
Onyinye maka ụmụ agbọghọ - echiche ọhụrụ
Onyinye na-akpali mmasị maka ụmụ nwoke
Kedu ihe bụ onyinye mbụ maka enyi nwanyị nwanyị ruo afọ 30?
Onyinye maka nwanyị ruo afọ 35
Achịcha Atọ n'Ime Otu
Kedu otu esi ahọrọ osisi Krismas?
Ezumike nke akọwachacha - akụkọ ihe mere eme
Otu nnọkọ nke "Great Gatsby"
Ememme nke nkwupụta
Ụbọchị onye ọrụ ahụike - akụkọ ntolite ezumike
Ntuziaka na - eme mgbanwe dị iche iche nke ule ahụ na ụdị nju nke ọ bụla!
Mgbagha uche nke uche na ụmụaka - mgbaàmà
Jennifer Lawrence na Oscar-2016
Ntinye aka nke aka ha
Egwuregwu Ndị Egwuregwu Nwaanyị 2013
Matthew McConaughey nwere okpukpu abụọ site na narị afọ ọzọ
Nri maka ihu - ihu
Lasagna na anụ a kụrụ anụ - uzommeputa
Ọgwụgwọ sinusitis na-enweghị ntụpọ
Dolphin maka ụmụaka
10 salads na onyinye maka ezumike magburu onwe ezumike
Cameron Diaz natara n'aka ịṅụ ọgwụ ọjọọ
Ihe ịrịba ama na November 4
Kedu esi esi nri mulberry?
Nzọụkwụ mbụ na nwa amụrụ ọhụrụ
Ego ole ka ị ga-esi kwụpụta akwụkwọ akụkọ?
Ogologo ụbọchị ole mgbe nwa na-amalite imezu?
Onye na-esi nri nke Multivarka - onye ịhọrọ?
Dyskinesia nke gallbladder
Fritters na yoghurt - uzommeputa
Mgbaàmà nke Ọrịa Bladder
Ọkwa - Ụdị